Bandowgii lagu soo rogay magaalada Galkacyo oo xalay si rasmi ah u dhaqan galay. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 9, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 09 – Waxaa xalay si rasmi ah u dhaqan galay bandow xooggan oo xilliga habeenkii ah lagu soo rogay magaalada Galkacyo, kaasi oo bilawday sideedii fiidnimo ee xalay.
Ciidanka ammaanka ayaa dhammaanba xiray waddooyinka dhax-mara magaalada iyo kuwa laga soo galo markii la gaaray xilligii bandowga, waxaana gaaf-wareegayey magaalada gaadiidka ciidanka roondada samaynayey, kuwaasi oo al-baabada iskugu dhufanayey goobo fara ku tiris ah oo la sheegay in ay furnaayeen xilligii bandowgu bilowday kadib.
Dhowr qof oo rayid ah iyo gaadiid aan badnayn oo ah kuwa lagu xaragooda ayey qabteen ciidanka bileysku intii ay ku howllanaayeen hirgalinta bandowga iyo sugidda ammaanka magaalada Galkacyo, waxaana dadkaasi iyo gaadiidkaasba lagu soo xir-xiray xarunta qaybta ciidanka bileyska ee gobolka sida ay Daljir u sheegeen saraakiisha bileysku.
Ma jirto cid wax ku noqotay intii ciidanka bileysku ay ku howllanaayeen hirgalinta bandowga, waxaana xilli hore oo fiidkii ahayd dadka shacabka ahi ay xireen dhammaanba goobahoodii ganacsiga si ay ugu hoggaansamaan amarka dawladda ee ku saabsan bandowga magaalada.
Waxaa la arkayey salaaddii cishaha kadib dadka iyo gaadiidka oo si aan kala go’ lahayn u qul-qulaya waddooyinka magaalada si ay durba ugu hooydaan ama u gaaraan guryahoda, maadaama maalintii shalay ahayd dawladdu ay ku dhawaaqday bandow xilliga habeenkii.
Bandowgaan ayaa yimid kadib markii ammaanka magaalada Galkacyo uu noqday mid sii xumaanaya maalinba maalinta ka danbaysa, waxaana dhowr jeer oo kala duwan ka dhacay magaalada dilal naxdin badan oo loo gaystay mas’uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland iyo dad shacab ahba.
BAAQ – Shirka saraakiishii hore ee ciidanka Qalabka Sida & Bilayska Soomaaliyeed. [Akhris …]